यही हाे स्वर्ण युग
के अहिलेको कालखण्ड नेपालका लागि स्वर्णयुग हो ? खासगरी राजनीतिक स्थिरताका दृष्टिले अहिलेको कालखण्ड स्वर्णिम युग हो ? यस्तो प्रश्नको जवाफ इतिहासले मात्र दिन सक्छ । तर, समकालीन नेपाली राजनीतिका मुख्यमुख्य खेलाडिहरुको टिप्पणी सुन्दा ‘स्वर्णयुग’ बारे चर्चा गर्नैपर्ने खण्डखातिर आइलागेको छ ।
शनिबार राजधानीमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनको गोष्ठीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद सिटौला दुवैले एउटा अनौठो तथ्यतर्फ मुलुकवासीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरु दुवैले वर्तमान संविधानले निर्दिष्ट गरेको चुनाव प्रणालीबाट कसैको पनि बहुमत आउन नसक्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले त प्रष्टैसँग के भनेका छन् भने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कुनै पार्टीले बहुमत सिट जित्यो भने पनि समानुपातिक सीटका कारण त्यो पार्टीको बहुमतको अवस्था रहँदैन ।
ओली र सिटौलाले किन माने ?
संविधानले नै बहुमतविहीन संसद्को परिकल्पना गरेको हो ? अथवा, संविधान निर्माणका बेला कसैको पनि बहुमत नआउने खालको निर्वाचन प्रणाली मुलुकमाथि लादिएको हो ? संविधान निर्माणका बेला ओली र सिटौला दुवै निर्णायक भूमिकामा थिए । उनीहरुले बहुमत नै नआउने खालको निर्वाचन प्रणाली किन स्वीकार गरे ? यस्तो प्रश्नले आगामी दिनमा ओली र सिटौलासहित तत्कालीन संविधानसभाका सबै सदस्यलाई निरन्तर घोचिरहने छ ।
निर्वाचन प्रणाली फगत भोट हाल्ने र कसैले चुनाव जित्ने या हार्ने प्रणाली मात्र होइन । कुनै पनि मुलुकमा विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व पहिलो सर्त हो । राजनीतिक स्थायित्व नहुने अर्थात् कुनै पनि दलले चुनावमा बहुमत नल्याओस् भन्ने परिकल्पना संविधानले गर्न हुँदैन । यस्तो परिकल्पना संविधानवाद् अनुकूल हुँदैन । निर्वाचनको अर्थ कुनै दलले बहुमत हासिल गरोस् र उसले बलियो सरकारसहित स्थायित्व देओस् भन्ने हो । तर, हाम्रो संविधानले नै बहुमत विहीनताको परिकल्पना गरेको हो भने यसलाई सच्याइनुपर्छ ।
ओली र सिटौला दुवैले एउटै कार्यक्रममा अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट चुनावमा कसैको पनि बहुमत आउन नसक्ने भनेर जुन तथ्य औंल्याए, त्यो तथ्यलाई सामान्य मान्न सकिन्न । अनुभवको कसीमा यो तथ्य स्थापित भइसकेको पनि छ । यस्तै प्रकारको निर्वाचन प्रणाली विगत दुई संविधानसभामा अपनाइयो, त्यसमा कसैको बहुमत आएन । यही संविधान अनुसारको निर्वाचन प्रणाली अनुसारको गत आमचुनावमा पनि कसैको बहुमत आएन । त्यतिमात्र होइन, भविष्यका चुनावमा केन्द्र सहित प्रदेशहरुमा पनि कुनै एक दलको बहुमत नआउने अवस्था कहालीलाग्दो हो ।
तथ्यले के देखायो भने नेपालमा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने खालको निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । मुलुकको भाग्य र भविष्यका लागि यो शुभलक्षण होइन ।
बहुमत नआउने खालको निर्वाचन प्रणाली हुँदाहुँदै पनि दुई राजनीतिक दल (नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादी) को एकीकरणका कारण अहिले बहुमतप्राप्त दलको सरकार मुलुकले पाएको हो । ती दुई पार्टीले एकीकरण गरेका थिएनन् भने अहिले पनि त्रिशंकु सरकार हुने थियो र रातोदिन प्रधानमन्त्री परिवर्तनको पूरानो खेल निरन्तर चलिरहने थियो, खसीबोका झैं सांसद किनबेच हुने थिए, सरकार टिकाउन प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुपर्ने थियो । सौभाग्यवश दुई पार्टीको एकीकरण भयो र बहुमत प्राप्त पार्टीको सरकार बनेको हो । एकीकरण भएको थिएन भने बुहमतको सरकार हुने थिएन ।
अहिले बहुमतको सरकार थिएन भने मुलुक पुन दुर्भाग्यमा जाकिने थियो । त्यसैले एउटा राजनीतिक दलको बहुमत प्राप्त सरकार हुनु स्वर्णयुग नै हो । निर्वाचन प्रणाली नसच्याउने हो भने भविष्यमा यस्तो स्वर्ण युग नआउन सक्छ । विगतको अस्थिरता, सांसद खरीद विक्री, सरकार परिवर्तन र मन्त्रिमण्डल बारम्बार पुर्नगठनको युग स्मरण गर्दा अहिलेको राजनीतिक स्थिरता र शान्ति स्वर्ण युग नै हो । र, यो स्वर्णयुग दुई पार्टीको एकीकरणका कारण संयोगवश मात्र प्राप्त भएको हो ।
संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीमा परेको भ्वाङ टाल्न सजिलो छैन । किनभने बहुमत नै नआउने खालको निर्वाचन प्रणाली नेपालमाथि लादिएको हो । जातीय उन्माद र समावेसीकरणको खोलमा विदेशी एजेण्डा मिसाएर नेपाललाई यस्तो अवस्थामा फसाइएको हो । अब जुन दिन संविधान संशोधन गरिनेछ, त्यसबेला निर्वाचन प्रणालीको यो भ्वाङ पनि टालिनुपर्छ ।
निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक स्थायित्व दिनुपर्छ, अस्थिरता दिने निर्वाचन प्रणाली बोकेर हिँड्नुको अर्थ छैन । नेपाली जनतालाई अस्थिरता अब मान्य छैन भन्ने तथ्यवोध सबैले गर्न आवश्यक छ । अहिलेको राजनीतिक स्थिरता अर्थात् स्वर्णयुग जोगाउनुपर्यो, यो स्वर्णयुग सदुपयोग गर्नुपर्यो । यो दायित्व सबै राजनीतिक दलको हो । निर्वाचन प्रणालीमा परेको भ्वाङ भविष्यमा कहिले टाल्न सकिन्छ भन्ने थाहा छैन तर स्थिरताको यो युग भने टिकाउन सकिन्छ , जोगाउन सकिन्छ । यो स्वर्णकालको उपयोग गर्नुपर्छ । स्थिरताको यो स्वर्णकाल जोगाउने–टिकाउने मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित नेकपाका नेताहरुको हो भन्ने सबैले बुझेका छन्, तर, नेकपाका नेताहरु स्वयंले चाहिँ बुझेका छन् कि छैनन् ?